सप्लायर क्रेडिट के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki आपूर्तिकर्ता क्रेडिट
एक आपूर्तिकर्ता ऋण के हो?
ALS आपूर्तिकर्ता क्रेडिट ग्राहकलाई एक सप्लायर द्वारा प्रदान गरिएको एक छोटो छोटो अवधि हो। यो प्राय: एक वस्तु क्रेडिट वा व्यावसायिक क्रेडिटको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। चलानी गर्दा, एक विशिष्ट भुक्तानी गन्तव्य दिइएको छ। ग्राहकले मात्र यो सहमतिको मिति मा आफ्नो इनभ्वाइस सुबिधा गर्न आवश्यक छ। यो एक प्रकारको वित्तपोषण हो। यद्यपि, आपूर्तिकर्ताले सामानको भुक्तानी नगरी स्वामित्व राख्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्दछ। हामी सबै वाक्यलाई थाहा छ "सामानहरू हाम्रो भुक्तानी पूर्ण भुक्तानी सम्म रहन्छ"।
यो सप्लायर ऋण कसरी काम गर्दछ?
एक आपूर्तिकर्ता ऋण को मामला मा, एक विशिष्ट भुगतान लक्ष्य आपूर्तिकर्ता र ग्राहक को बीच सहमत भएको छ, ज्यादातर मामलाहरुमा यो 14 दिन हो। तथ्याङ्कमा, तथापि, 30 दिनहरू शुद्ध हुन सक्छन्। यदि ग्राहकले दिइएको भुक्तानी गन्तव्यको सामने उनको प्राप्त वस्तुहरूलाई भुक्तानी गर्दछ भने, उनीहरूलाई नामक स्कोन्टोफिस्ट प्रदान गरिएको छ! यी सामान्यतया 3% हो। यसको अर्थ ग्राहकले भुक्तानी गर्नु अघि नगद छूट फिर्ता लिन सक्छ। यो पुन: कुल बिल योगमा छुट छु। विक्रेता (विक्रेता) खातामा, त्यसपछि वाक्य "10 दिन भित्र इनभ्वाइस रकमको भुक्तानीमा 3% छुट छ"। ग्राहकले इनभ्वाइस योग 3% बाट कटौती गर्न सक्छ। 30 दिनको एक भुक्तानी भुक्तानी उद्देश्यका लागि एक विक्रेता हो, त्यसोभए इनभ्वाइस रकम त्यसपछि "नेट नगदमा 30 दिन भुक्तानी भित्र भुक्तानीको लागि।"
एक आपूर्तिकर्ता ऋण को पेशेवर र विपक्षी
लाभ स्पष्ट छ। विशेष गरी साना कम्पनीहरू र मध्यम आकारका कम्पनीहरूले यसबाट लाभ उठाउँछन्।
तपाईं अग्रिम भुक्तान गर्न र अनावश्यक जब तिनीहरूले सामान तिर्न को लागी समय छ। एन आपूर्तिकर्ता क्रेडिट एक प्रक्रिया हो जुन प्रायः साधारण छ। यो विक्रेता र उधारकर्ताको बीचमा मात्र एक सम्झौता हो जुन बिना बैंक "डुङ्गामा लिने" हो। एक आपूर्तिकर्ता ऋण सामान्यतया उपलब्ध छ। बैंकमा कुनै जटिल प्रश्नहरू र अनुमोदनको लागि पर्खनु पर्दैन अब आवश्यक छैन। यसले उधारकर्ता समय र नर्विकाहरुलाई बचाउँछ। सबै परीक्षणहरू (ग्राहकहरूको क्रेडिट कार्ड) रद्द गरिएका छन् र सामानहरू आदेश गर्न सकिन्छ र तुरुन्तै खरिद गर्न सकिन्छ। 1-2 दिनहरू विक्रेन्ड इनभ्वाइसको प्राप्त गर्नु अघि प्रायः पारित हुन्छ। आपूर्तिकर्ता क्रेडिटलाई जर्मनीमा ग्राहकहरु लाई पनि विदेशमा पठाउन सकिन्छ।
तर आपूर्तिकर्ता क्रेडिटले पनि कमी छ। यो एक उच्च प्रभावी ब्याज दर को लागत। यो इनभ्वाइसहरूमा उल्लेख गरिएको छैन। यसको मतलब उधारकर्ताले पूर्णतया भुक्तानी लक्ष्यको प्रयोग गर्दछन् भने, त्यो छूट प्रदान गरेर मूल्य घट्छ। यदि यो पूर्णतया भुक्तानी लक्ष्य पूरा हुन्छ भने, प्रभावकारी ब्याज दर धेरै उच्च छ। यो 30% को 30 दिन को भुक्तानी लक्ष्य को लागी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर को आसपास हुन सक्छ। ग्राहक यति विश्वासमा रहेको छ कि उसलाई ब्याज-मुक्त क्रेडिट दिइनेछ। तर यो मामला होइन, दुर्भाग्यवश मात्र पहिलो नजर हेर्दै।
तर एक आपूर्तिकर्ता ऋण अर्थव्यवस्थाको लागि सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा तेज तरिका हो जुन बैंकिङ बिना एक ऋण को वित्तपोषण को डिजाइन र बनाए राख्छ। प्रदायक र ग्राहक ऋण अल्पकालिक व्यापारिक ऋण हो, जुन वित्तीय समाचार पत्र क्षेत्रमा शीर्ष स्थानमा राखिन्छ। तिनीहरू खुसीसाथ प्रयोग गरिन्छ र एक विक्रेता द्वारा खुसीसाथ क्षमा दिन्छन्। यो राखन सजिलो छ र सामान भुक्तानी नभएसम्म आपूर्तिकर्ताको सम्पत्ति रहन्छ।
अघिल्लो लेखवार्षिक उत्पादन
अर्को लेखउधारो शुल्क